ပန်ဒိုရာ: Happy New Year 2011!
မင်္ဂလာ နှစ်သစ်မှာ အားလုံး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
Posted by pandora at 1:09 AM
ထင်နေတယ် ထင်နေတယ် ... ဒါမျိုး ကာတွန်းပုံလေးတွေနဲ့ နှစ်သစ်ကို ကြိုလိမ့်မယ်လို့ ...
မင်္ဂလာရှိသော ၂၀၁၁ ဖြစ်ပါစေ ... ။
Restoring peaceful shadows, may wisdom lead all of you.
မင်္ဂလာ Gregorian နဲ့ ကရင်နှစ်သစ်ပါ၊ အားလုံးပဲ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာစေဖို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။ :-)
တောင့်တတိုင်း ပြည့်ဝရသော ၂၀၁၁ ဖြစ်ပါစေ ပန်ပန်...
နှစ်သစ်မှာ ပန်ဒိုရာ ပိုပြီးထင်တိုင်းကြဲနိုင်စေဗျား။ ကျန်းမာပါစေ။
Happy New Year Pan Pan :)
Cynthia Erivoရဲ့ Stand up (ပါဠိversion) - ရပ်တည်မှုရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက အရေးပါတယ်။ ဖြစ်တည်မှုအ​ပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုတွေ ရှိနေမှာပါ။ ရွေးချယ်မှုကတော့ ကိုယ့်အပိုင်းပါ။ အမျိုးမျိုးသော ရပ်တည် ဖြစ်တည်မှုတွေကို သုံးသပ်မ...
ရှမေိုးသညျးပွောတဲ့ ကဗြာတဈပုဒျအကွောငျး..... - ရှမေိုးညိုလို့ သူငိုနမှောလား ကိုယျ့အလှမျးတှကေို သူသိအောငျပွောပေးပါ ရှမေိုးရယျ.... သူနဲ့တှခေဲ့တဲ့ အိပျမကျတှအေကွောငျး အဖွူရောငျတှအေကွောငျး ရငျခုနျသံတှအေက...
Cinematic New York - Credibly administrate team building process improvements via goal-oriented applications. Dramatically recaptiualize collaborative convergence for intuitive...
#စကြာဝဠာထဲမှာတနေရာ - အဲဒီကနေကြည့်ရင် ငါ့ကိုဇောက်ထိုးမြင်ရမယ် လေမရှိတာ့ နေ့လယ်၂နာ၇ီမှာ လက်ဖက်ရည်ကို မှုတ်သောက်လို့မရဘူး အိမ်တွေဟာ ပျံနေတော့ အိမ်ပြန်စရာလဲမလိုတော့ နောက်ကလိုက်လာတ...
Finding Art in the City - 2
ထူးခြားဆန်းပြား စွယ်တော်ရိပ် ၂၀၁၁ အစီအစဉ်များ
ကောင်းကင်များ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ ၂၀၁၁
အချစ်နဲ့ ခပ်ကင်းကင်း နေလိုပါသော်လည်း